चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
मुख्य खबर, लगानी 379 views
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् कम्पनी विश्लेषण
चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीले २०७४/७५ आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ५२ करोड ४६ लाख नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ४ प्रतिशतले कमी हो । विद्युत् विक्रीमा कमी आएकाले कम्पनीको नाफा घटेको हो । पुस मसान्तसम्ममा कम्पनीको चुक्तापूँजी १५ प्रतिशतले बढेर रू. ३ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख पुगेको छ । रिजर्भ कोषमा रू. ४ अर्ब ५६ करोड ८९ लाख छुट्याएको छ । यस कम्पनीको सहायक कम्पनी रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी, सान्जेन जलविद्युत् कम्पनी र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् । रसुवागढी र सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कार्यरत कर्मचारी र संस्थापक संस्था गठित संस्थाका कर्मचारीहरुलाई शेयर जारी गरिसकेका छन् । पुस मसान्तसम्ममा पानीको बहाव उच्च भई बिजुली उत्पादनमा कमी नआएपनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको पीपीएको प्रावधान अनुसार सबै विद्युत् खरीद नभएका कारण विद्युत् आयमा कमी आएको कम्पनीको भनाइ छ । ब्याज आम्दानी तथा अन्य आम्दानी ४६ दशमलव ३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । साथै कम्पनीले कात्तिक २४ गते सम्पन्न भएको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित १५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरिसकेको छ ।
वर्गिकरणः जलविद्युत् कम्पनी
पछिल्लो व्यापार मूल्यः रू. ७६०
५२ हप्ताको उच्च व्यापार मूल्यः रू. १८१५
५२ हप्ताको न्यून व्यापार मूल्यः रू. ६६१
१८० दिनको औषत व्यापार मूल्यः रू. ८६१.८७
अध्यक्षः कुलमान घिसिङ
प्रधान कार्यलयः धुम्बाराही, काठमाडौं
स्टक स्टिकरः सिएचसिएल
कम्पनीको आव २०७३/७४ र आव २०७४/७५ को दोस्रोे त्रैमासिक वित्तीय विवरणबीच तुलनाः
चुक्तापूँजीको तुलनामा खुद नाफा १३ दशमलव २३ प्रतिशतबाट घटेर ७ दशमलव ५६ प्रतिशतमा सिमित भएको छ । कम्पनीको लगानी रू. ५ अर्ब ९१ करोड ६५ लाखभन्दा बढी रहेको छ । यो अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा ८ प्रतिशतले बढी हो ।
कम्पनीको खुद चालू सम्पत्ति १३ प्रतिशतले वृद्धि भई रू. १ अर्ब २९ करोड ४६ लाख पुगेको छ भने चालू दायित्व रू. ९० करोडभन्दा बढी रहेको छ । कम्पनीको विद्युत् विक्री आयबाट रू. ६३ करोड २१ लाख आम्दानी भएको छ । यो रकम अघिल्लो आवको दास्रो त्रैमासमा रू. ६५ करोड ४२ लाख आम्दानी भएको थियो । यो अघिल्लो आवको तुलनामा ३ प्रतिशतले कमी हो ।
कम्पनीको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. २६ दशमलव ४७, मूल्य आम्दानी अनुपात(वार्षिक) ३६ दशमलव ०५, तरलता अनुपात ३ दशमलव २८, प्रतिशेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य रू. २ सय २९ दशमलव ६५ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय १५ दशमलव २३ रहेको छ । मङ्गलवारको शेयर मूल्य नेटवर्थको साढे ३ गुणा छ ।
खरीद चापः कम्पनीको मङ्गलवार भएको कारोबारमा अन्तिम समयसम्ममा विक्री चापभन्दा खरीद चाप साढे १ गुणा बढी थियो । सो समयसम्म ६ हजार १ सय १० कित्ता शेयर खरीद र ४ हजार २० कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
९ जनवरी २०१८ १० अप्रिल २०१८
मैनबत्ती विश्लेषणः कम्पनीको ५७ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिन कोलो मारुबोजु आकृति बनेको छ । यसले आगामी दिनमा शेयर मूल्य घट्ने सङ्केत गर्दछ ।
आरएसआईः कम्पनीको ५७ दिनको कारोबार अवधिमा न्यूट्रल जोन (५० दशमलव ०५)स्केलमा छ । यसले खरीद विक्री चाप सन्तुलनमा रहेको देखाँउछ ।
स्ट्याण्डर्ड डेभिएशनः कम्पनीको ५७ दिनको कारोबार अवधिमा २५ दशमलव २८ विन्दुमा छ । यसले उतारचढाव सामान्य रहेको देखाउँछ ।
मुभिङ एभरेजः कम्पनीको ५७ दिनको कारोबार अवधिमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिदै गएका छन् । हालको मूल्य, १४ दिने मूल्यरेखा र २६ दिने मूल्यरेखाभन्दा माथि रहेको छ । हालको मूल्य रू. ७ सय ६० देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महङ्गिएमा रू. ७ सय ९४ मा प्रतिरोध र सस्तिएमा रू. ७ सय २७ मा टेवा पाउने देखिन्छ ।